Iindaba malunga ne-Oukitel: iifowuni, uphononongo, ukukhutshwa kunye nokunye - i-Androidsis | I-Androidsis (iphepha 2)
I-Oukitel Y4800 vs Xiaomi Redmi Qaphela i-7: uvavanyo lwentsebenzo
Uvavanyo lwentsebenzo entsha ye-Oukitel Y4800, i-terminal eya kuthi ifike kwimarike phakathi kuJulayi nge- $ 199.
Le yindlela iOukitel evavanya ngayo umgangatho weetheminali zabo
Ukuba ufuna ukukhangela umgangatho we-Oukitel K12 entsha, inkampani isibonisa ividiyo apho sibona khona zonke iimvavanyo abazenzayo kuyo.
I-Oukitel C16 Pro ngoku kuthengiswa kwangaphambili ngexabiso elingenangqondo!
I-Oukitel C16 Pro entsha ngoku iyafumaneka kwiwebhusayithi esemthethweni yomenzi waseTshayina kwiAliexpress njengokuthengisa kwangaphambili. Yazi!
Ngoku ungagcina i-Oukitel K12, i-terminal ene-10.000 mAh ibhetri kunye ne-6,3-intshi yesikrini
Ngoku ungagcina i-Oukitel K12, i-terminal ene-10.000 mAh ibhetri nge- $ 239,99 kuphela kwaye iya kukhutshwa ngoJuni 17.
Ukuba awunayo iklasi oza kuyithetha ngeRedmi Qaphela i-7 okanye i-Oukitel Y4800, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda uthathe isigqibo sesinye sezi zimbini.
Ukuba awukaqiniseki ukuba i-Oukitel yi-smartphone oyifunayo, kweli nqaku sikunika izizathu ezi-5 zokugqiba ukuguqula ngokwakho.
I-Oukitel iya kuqala uluhlu olutsha oluMncinci nge-Y4800 kunye nekhamera yayo ye-48 mpx
Abafana abavela e-Oukitel bazisa izixhobo ezahlukeneyo kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali unyaka wonke. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi ...
Ngoku sinokugcina i-Oukitel K9
Iflegi ye-Oukitel, i-K9, ngoku iyafumaneka ukuthengiswa kwangaphambili kunye nesaphulelo esibalulekileyo kwixabiso layo lokugqibela le- $ 249,99.
Inkampani yaseAsia i-Oukitel iza kuphehlelela i-K12 ngoJuni, i-terminal ene-10.000 mAh ibhetri.
Ukuqala ngoMeyi olandelayo we-13, uya kuba nakho ukugcina i-Oukitel K9 kwaye ke ugcine i-50 yeedola kwixabiso layo lokugqibela kwintengiso.
Izizathu ezili-9 zokuba kutheni ukuthenga i-Oukitel U25 Pro ngumbono ogqwesileyo
Ukuba usithathe isigqibo sokuthenga i-Oukitel U25 Pro, nazi izizathu ezili-9 zokuba kutheni kufuneka uyithathele ingqalelo.
Uphengululo OUKITEL U23
Dibana ne-OUKITEL U23, 6.18-intshi yesikrini esine-notch, ikhamera emibini kunye noyilo olubonakalayo oluncinci kunokuba ucinga
I-OUKITEL U25 Pro ngoku isemthethweni
Kwezi veki sithethe nawe kwizihlandlo ezimbalwa malunga ne-OUKITEL U25 Pro.
Apha ngezantsi sikubonisa ukuba zithini iinkcukacha zesiphelo sendlela elandelayo eza kuthi iqaliswe yinkampani ye-Oukitel kwintengiso: U25 Pro
Fumana i-Oukitel C11 Pro nge $ 69,99 kuphela
IKrisimesi lixesha lonyaka apho abasebenzisi abaninzi basebenzise ithuba lokuhlaziya iiterminal zabo. Kunyaka wonke…
Amandla e-Oukitel K7, kunye ne-10.000 mAh ibhetri, ithengiswa nge- $ 99,99 kuphela
Ukuba ucinga ukuvuselela i-smartphone yakho yakudala, kunokwenzeka ukuba isithembiso esasinikwa yi-Oukitel siya kuba nomdla kuthi.
I-OUKITEL U25 Pro: Ifowuni entsha enefuthe lomgangatho
Fumanisa konke malunga ne-OUKITEL U25 Pro, ifowuni entsha ekumgangatho ophakathi ovela kuphawu lwaseTshayina, oluza kuqaliswa kule nyanga kwintengiso.
I-OUKITEL U23: I-brand entsha ye-smartphone enotshi
Fumana ngakumbi malunga ne-OUKITEL U23, ifowuni entsha yenotshi evela kumenzi waseTshayina onokuthi uthathe nesaphulelo sokwazisa kwayo.
I-OUKITEL C11 Pro: Ukucaciswa kophakathi kwinqanaba elitsha. Fumana ngakumbi malunga nale modeli intsha yenkampani kuluhlu lwayo oluphakathi.
Amandla e-OUKITEL K7: Imodeli entsha enebhetri ye-10.000 mAh
Amandla e-OUKITEL K7: Uluhlu oluphakathi lwebrand entsha. Fumanisa okungakumbi malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi kuhlobo lwesiTshayina oluza kungena kwintengiso kule nyanga
Ukuba uceba ukuvuselela i-smartphone yakho yakudala kungekudala kwaye ujonge imodeli enganyangekiyo, othululwayo kunye namanzi, i-Oukitel WP2 inokuba yimodeli oyifunayo.
Ukubheja nge-Oukitel kuyilo lwesiko lwe-Oukitel K8
Isiphelo esilandelayo esiza kuboniswa yi-Oukitel yi-K8, i-terminal enoyilo lwesiko, i-intshi ezi-6 intshi kunye ne-5000 mAh ibhetri
I-OUKITEL K7 iyafumaneka uku-oda kwangaphambili kwe- $ 159,99
Fumana i-OUKITEL K7 ngesaphulelo seedola ezingama-30 kuphehlelelo lwayo. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwefowuni kwiBanggood.
Iinjineli ze-OUKITEL zityhala nzima: zilungele ukumilisela i-OUKITEL K7 ngebhetri ye-10.000mAh
NgoJuni 19 ungathenga i-OUKITEL K7 kunye nebhetri yayo ye-10.000mAh kwintengiso yokuqala yehlabathi. Ungagcina i- $ 30 ngeli khuphoni.
[Ividiyo] I-OUKITEL K7 enebhetri ye-10.000mAh iya kuvavanyo lokuzimela
Sithetha nge-OUKITEL K7, iselfowuni yezoqoqosho kunye nenamandla eza nebhetri enkulu ye-10000mAh ethi, ngaphandle kwebhetri enkulu ethwele ngaphakathi, ixabiso layo liya kuba yinzuzo ngakumbi kunye nokusebenza kwayo okanye ikhamera
I-OUKITEL K7: Eyona fowuni ibiza ixabiso eliphantsi kunye nebhetri ye-10.000 mAh
I-OUKITEL K7: Ifowuni entsha enebhetri ye-10.000 mAh. Fumana ngakumbi malunga nesixhobo esitsha sophawu esivelise ibhetri enkulu.
I-OUKITEL U18, i-smartphone enesikrini sonke ene- "Notch" ephezulu kunesitayile esinyulu se-iPhone X, ekwavela kuyo i-4 GB ye-RAM, imemori engama-64 GB kunye nebhetri engama-4000 mah. Sikuxelela iimpawu zayo, ixabiso kwaye ukuba ngokwenene kufanelekile.
Fumanisa i-OUKITEL K6, ukuzibophelela kwenkampani kwenye yeefowuni ezinamandla ukuza kuthi ga ngoku, 6 "screen kunye neHelio P23 chip
I-Oukitel K10, i-smartphone ene-11.000 mAh ibhetri ehlala iveki
I-Oukitel iya kubeka i-K10 kwintengiso ekuqaleni konyaka olandelayo, i-terminal ene-11.000 mAh yebhetri ekungekho mfuneko yokuba uyihlawulise ngeveki.
I-Oukitel iza kuphehlelela i-OUKITEL K6 ngaphambi kokuphela konyaka, yazi ii-specs zayo!
I-OUKITEL K6: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga ne-brand entsha ye-smartphone eza kuphehlelelwa ngeKrisimesi.
Fumana i-OUKITEL MIX 2 nge- $ 99,99 kuphela
I-OUKITEL MIX 2 iyafumaneka nge- $ 99,99 yexesha elimiselweyo. Fumana ngakumbi malunga nokukhuthazwa kwesixhobo esifumaneka ngexabiso elikhethekileyo.
Fumana i-OUKITEL MIX 2 kwiGearbest nge $ 229,99 kuphela
I-OUKITEL MIX 2: Ukucaciswa kunye nokunikezelwa kwiGearbest ngoku kuyafumaneka. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-OUKITEL ekhoyo ngoku yokugcina.
Ukuphonononga i-Oukitel C8 i-Android 7.0 ye-Android enexabiso eliphantsi endimangazileyo
Apha ndikushiya oku kujongwa ngokupheleleyo kwevidiyo ye-Oukitel C8, isiphelo sendlela esinomdla kakhulu somsebenzisi okhangela i-terminal yenqanaba lokungena le-Android.
I-Oukitel K5 entsha, ilandela imeko ye-18: 9 skrini
Ukuphehlelelwa okulandelayo okuvela kwi-Oukitel yimodeli ye-K5, i-terminal enesikrini esikhulu se-5,7-intshi kwifomathi ye-18: 9.
Fumana i-OUKITEL K5000 yakho ngesaphulelo ngaphambi kokuthengiswa
Fumana ukusukela ngomso kude kube ngu-Okthobha i-29 i-OUKITEL K5000 engakholelekiyo ngexabiso elimangalisayo, $ 149,00 !! Ungaphoswa sesi sibonelelo.
I-OUKITEL K5000, i-smartphone encinci enkulu
Enye i-smartphone evela kwi-OUKITEL, i-K5000, eza kubonisa ukuba kunokwenzeka ukubonelela ngokusebenza okuphezulu ngamaxabiso afikelelekayo
Uvavanyo kunye novavanyo lokumelana ne-Oukitel K10000 MAX
Apha ndikushiya uphononongo olupheleleyo kunye novavanyo lokuchasana ne-Oukitel K10000 MAX, uphononongo kwaye ngaphezulu kwako konke uvavanyo lokunganyangeki olungamangalisi.
I-OUKITEL MIX 2, entsha evela kumenzi waseTshayina
Dibana ne-OUKITEL MIX 2, ukubheja kwalomvelisi waseTshayina phezulu koluhlu, i-smartphone enokwenza eyona blush inkulu
I-OUKITEL K8000 i-smartphone ngeyona bhetri inde kakhulu kwintengiso
I-OUKITEL K8000, i-smartphone enomdla ongayi kuhlawulisa iintsuku ezintlanu kwaye inempawu ezifanelekileyo eziphezulu zoluhlu
Unboxing kunye nokuqala kokuvela kwe-Oukitel K10000 MAX
I-Unboxing kunye nokuqala kokuvela kwe-Oukitel K10000 MAX, i-terminal enee-10000 mAh ibhetri kunye nolwakhiwo lobungqina bebhombu.
Ukuphonononga ividiyo erekhodwe kwi-Oukitel K3 uqobo apho ndicacisa khona iimvakalelo zam emva kweentsuku ezisithoba zokusetyenziswa kakhulu kwesiphelo
I-OUKITEL K5000 entsha ene-5000 mAh ibhetri kunye ne-5,7 ″ isikrini esiya kuthengiswa ukuphela kwenyanga
I-OUKITEL K5000 entsha iya kufika kwintengiso ekupheleni kuka-Okthobha nge-5,7-intshi FHD screen kunye nebhetri ye-5000 mAh, ukutshaja ngokukhawuleza nokunye.
Unboxing kunye nokuqala kokuvela kwe-Oukitel K3.
Apha unayo i-unboxing kunye nokuqala kokubonakala kwe-Oukitel K3, i-Android terminal enebhetri enkulu ye-6000 mAh, isikrini esigcweleyo se-HD ngexabiso lokuhleka.
I-OUKITEL Mix 2 kunye ne-OUKITEL C8, iifowuni ezimbini ezothusayo kwiscreen sabo
I-OUKITEL ilungiselela iifowuni ezimbini ezintsha, i-OUKITEL C8 kunye ne-OUKITEL Mix 2, ezimele isikrini sayo esingenasiphelo, uyilo olulinganisiweyo kunye nexabiso elifanelekileyo
I-OUKITEL K10000 MAX itshabalalisa abakhuphisana nabo
Kuvavanyo olutsha, i-OUKITEL K10000 ijongene ne-iPhone 7 PLus kunye ne-iPad Mini 4, iphindwe kathathu ubude beebhetri zabo
U-OUKITEL uvavanya ubomi bebhetri ye-OUKITEL K3
I-OUKITEL K3 ngoku iyafumaneka ukuyigcina kwaye umenzi uyayibhiyozela ngokupapasha uvavanyo lokuchasana nebhetri yayo ukubonisa ukuzimela kwayo.
I-OUKITEL K10000 MAX iya kusebenza iveki e-1 kunye nohlobo lwezoqoqosho olusebenzayo
I-OUKITEL K10000 MAX yenye yee-smartphones ezomeleleyo ezinebhetri enkulu emhlabeni, kwaye ukuzimela kwayo kuye kwavavanywa.
I-OUKITEL K3 kunye ne-Sony Xperia XZ yeNkulumbuso, ii-smartphones ezimbini ezifanayo kodwa ezahlukileyo
I-OUKITEL K3 entsha yi-smartphone efana kakhulu ne-Sony Xperia XZ yePrimiyamu kuyilo kunye neenkcukacha, kodwa ikwahluke kakhulu, ngakumbi kwixabiso
Ukuthengiswa kwangaphambili kwe-OUKITEL K3 kuqala ngezaphulelo ezinamanzi
Inqanaba lokuthengisa kwangaphambili kwe-OUKITEL K3 sele iqalile kwaye ngoku ungayifumana ngesaphulelo sedola ezingama-40 kunye nezipho ezingaphezulu, ungavumeli ukuba ibaleke
I-OUKITEL ipapashe ividiyo apho ibonisa zonke iinkcukacha ze-OUKITEL K10000 Max, ifowuni egqibeleleyo nenqabileyo.
I-OUKITEL K3, zonke iinkcukacha zayo zichaziwe
U-OUKITEL usandula ukupapasha iimpawu ezisemthethweni ze-OUKITEL K3, ifowuni entsha evela kumenzi waseAsia ekwanayo noyilo lweprimiyamu
I-OUKITEL K10000, yile fowuni intsha ye-OUKITEL
Ezinye zeempawu zobuchwephesha ze-OUKITEL K3, isiphelo sendlela esiphakathi kunye neekhamera zangaphambili nangasemva zivelisiwe.
I-OUKITEL K10000 MAX, i-smartphone engakholelekiyo enebhetri ye-10.000 mAh
I-OUKITEL K10000 MAX sisiphelo sendlela eyenzelwe abathandi bemisebenzi yangaphandle, ngezinto zomkhosi kunye nebhetri eyi-10.000 mAH
I-OUKITEL K10000 Max, i-smartphone enebhetri engapheliyo
I-OUKITEL iqinisekisile ubukho be-OUKITEL K10000 Max, isixhobo esivelela ibhetri yalo engapheliyo ye-10.000 mAh kunye ne-IP68
I-smartphone eneyona bhetri inkulu ehlabathini iye yangcono nangakumbi
Ifowuni enebhetri enkulu emhlabeni, i-Oukitel K10000 Pro, ihlaziywa ngetekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza kunye ne-3GB ye-RAM.
Uhlalutyo lwe-Oukitel U15S: ukwakhiwa kwealuminium kunye ne-4 GB ye-RAM ye- € 150
Ukuqhubeka nohlalutyo lwethu lwee-terminals ezisezantsi neziphakathi ku-Asia, ngeli xesha lithuba le-Oukitel ...
Iikhamera ezimbini zeBluboo Dual kunye ne-Oukitel U20 Plus zibeka ubuso ngobuso
Siphonononga umahluko kwinkcazo yoqwalaselo lobumbeko lweekhamera zeBluboo Dual kunye ne-Oukitel U20 Plus.
I-Oukitel K10000, irhamncwa eline-10.000 mAh ibhetri
I-Oukitel K10000, isixhobo esivelise ibhetri ye-10.000 mAh enomtsalane ethembisa ukuzimela kweentsuku ezili-10.
I-OUKITEL K6000 Pro, le yi-OUKITEL phablet entsha
I-Oukitel K6000 Pro inikezelwe, ifowuni ebonakala ibhetri yayo enomdla engama-6.000 mAh ethembisa ukuzimela okungenakuthelekiswa nanto
I-Oulkitel A29: Fumanisa i-smartwatch eneSIM ye- $ 70 ye-oda yangaphambili
I-Oultikel yixabiso eliphantsi le-smartwatch elihamba kwimarike namhlanje nge-70 yeedola kwaye ngokukodwa ukuba ne-SIM slot yayo. Ngaba iya kuphumelela? Siyakuxelela ...
I-Oukitel A28 iwotshi elungileyo yealuminium
I-Oukitel A28 yi-smartwatch yokuqala evela kumenzi wase-China oza kufika ukuphela kwenyanga.